Khabar Nirantar | » शशांकलाई विरासतले थेग्ला? शशांकलाई विरासतले थेग्ला? – Khabar Nirantar
काठमाडौँ – २० वर्ष आँखा चिकित्सकका रुपमा बिताएका डा शशांक कोइरालाले दुनियाँको आँखा हेरे, उपचार गरे। २०६२ मा सम्पन्न ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य बनेका उनले राष्ट्रको ‘आँखा हेर्ने’ भूमिका प्राप्त गरिसकेका छैनन्। पार्टीको ‘आँखा हेर्ने’ एक तहको भूमिका भने निभाइरहेका छन्।
महामन्त्रीको उम्मेदवारको रुपमा ज-जसले सहयोग गरेका थिए, उनीहरुबाट पुनः सहयोग पाउनु शशांकका निम्ति चुनौतीपूर्ण छ। संस्थापनइतर समूहका अन्य नेताको मात्रै कुरा होइन, कोइराला परिवार नै शशांकका निम्ति ‘तगारो’को रुपमा देखिन्छ।
१३औं महाधिवेशनमा शशांकलाई महामन्त्री बन्न बाटो खालि गरिदिएका डा शेखर कोइरालाले यसपटक सभापतिको प्रत्यासीको रुपमा भने उनलाई नछाड्ने बताइसकेकै छन्। कतिसम्म भने शेखरले त त्यतिबेला आफू शशांकलाई छोड्नुलाई आफ्नो ‘गलत’ निर्णयको रुपमा समीक्षा गर्दै आएका छन्। उनी संस्थापनइतर समूहबाट आफू नै सभापतिको उम्मेदवार बन्ने दाउमा छन्।
बिपीका जेठा छोरा प्रकाश कोइराला राजनीतिबाट टाढिएका छन्। राजसंस्थाको पक्षमा देखिएपछि प्रकाश कोइरालालाई कांग्रेसले निश्कासन गरेको थियो। अर्का छोरा श्रीहर्ष राजनीतिमा प्रवेश नै गरेनन्। शशांकमै ‘बिपी-फ्लेबर’को राजनीतिक उच्चता खोजिएको थियो। जसका लागि उनी पनि लागिपरेका छन्। तर, कठिनाइ देखिने मात्रै होइन, असम्भव नै प्रतीत हुन्छ।
आफूमा सबल नेतृत्वको गुण विकास गर्दै पार्टी कार्यकर्ता तथा जनताको विश्वास जित्ने प्रयत्न गरेका छैनन्, शशांकले। बरु पारिवारिक विरासत र धर्मको त्यान्द्रो समाएर राजनीतिक बाढी तर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।स्रोतः नेपाललाइभ